Petersburg ingenye wemizi emikhulu kakhulu Russian Federation, ngakho lapho ngaso sonke isikhathi, izivakashi zivela kwamanye amazwe amaningi ukuze ngokuzimela ukuhlola Ubuhle baleli dolobha elihle. Ngaphezu lenqwaba ezikhangayo kuwufanele ngokuvakashela izindawo ezithile Petersburg, futhi kumayelana hhayi kuphela amathiyetha edume kakhulu nomculo, kodwa futhi abanye zokudlela kunalokho ethakazelisayo sithuthuka nsuku zonke, ukubamangaza amaklayenti imenyu langa hhayi kuphela, kodwa inkonzo izinga kanye nabanye abaningi. Namuhla sikhuluma sikhungo abadumile inhlokodolobha abandayo wezwe lakithi, njengoba "Bhehemoti" (yokudlela, Petersburg). Izibuyekezo Siphinde bavumelana kulesi sihloko encane.
ulwazi oluyisisekelo mayelana nesikhungo
Le ndawo yokudlela emangalisayo isendaweni Garden Petersburg emgwaqweni (indlu №12), futhi "omdala" kulabo abafuna ukuphila enhle, ngoba konke lapha ngakho emangalisayo enhle. Ngaphezu kwalokho, kukhona iyatholakala bar Karaoke (ukuba enembile, itholakala esitezi sesibili). Zonke ayihlomele ngokuphelele, futhi okubaluleke - ezingeni okhokhelwayo.
izikhungo Administration baye balondoloza ubunye njalo ukuthi uma ufuna induduzo, uhlale phezu emasofeni eliphambili futhi uma ufisa ukuvakashela e izicathulo we umdwebi weqiniso, isinyathelo ke xaxa esigabeni ukukhanyisa khona. Futhi uma ufika endaweni yokudlela "imvubu", Petersburg (ikheli ngenhla) nomlingani wakho, kungani ungase manje musa umhlalaphansi egumbini ihholo ekhethekile, lapho umoya ukusondelana liyanqoba, izihlalo extra-ukhululekile nezibuko omkhulu, futhi ukuthuthukisa romance amakhandlela?
Lokukhipha kule ndawo zihlale elikhulu kakhulu, futhi ngokuvamile ngezinsuku zeviki ungavakashela ezithakazelisa kakhulu Culinary iwayini okufanayo, kanye neminye imiqhudelwano ethandwa ngokulinganayo futhi ethandwa kusukela nokuphathwa project. The hero esemqoka ye wonke umuntu kusihlwa kule isikhungo ngokuthi "uBehemoti" (yokudlela, Petersburg), umdlali wamabhayisikobho odumile waseRussia, showman kanye umethuli omkhulu Maxim Bryzgalin. Ngokuvamile, kunengqondo ukuthi ngeke kube nesithukuthezi kule ndawo akekho!
Izimvubu - ezidla uhlaza!
Nokho, Ngeshwa, lesi sitatimende kuyiqiniso. Nokho, kufanele kuphawulwe ngokushesha elikhonza lapha ngokuphelele ukudla, kuhlanganise inyama, kungani kumelwe ukhathazeke mayelana imenyu imifino akudingekile.
Lapha ungakwazi oda quesadilla, ingwane, meatballs, turkey kanye nezinye izitsha eziningi, kodwa kwimenyu enkulu sakwenza ukuxoxa kancane kamuva, ngakho-ke manje okudingekayo okungakusiza ukuba ubhekane-iri wokusebenza kanye neminye imininingwane eyengeziwe.
By the way, emnyango "uBehemoti is back» (Petersburg yokudlela) is sikufanele konke uBehemoti efanayo edume ukuthi ingaphezu ngonyaka dogging isikhungo.
Amanzi ahamba kule ndawo yokudlela, njengoba kushiwo ku-website esemthethweni, ngoLwesine kusukela 21 kuya 5:00 am, futhi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo - 6 ekuseni. Ngakwelinye ihlangothi, Karaoke ngoLwesine futhi ugijimela kuze 5 ekuseni, futhi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo - 6 ekuseni. Kusukela ngeSonto, kusho isikhungo akusebenzi.
Isheke isilinganiso kule ndawo yokudlela imayelana omunye eziyinkulungwane nengxenye ruble Russian umuntu ngamunye. Futhi zonke izitsha phezu imenyu izitsha ngamazwe. Cacisa noma yiluphi ulwazi kusuka nokuphathwa izikhungo ngesikhathi inombolo yocingo: +7 (812) 640-16-16.
Ngaphezu kwalokho, endaweni enjalo, njengendawo yokudlela "imvubu" (Petersburg), ungakwazi umyalelo noma iyiphi isidlo santambama, anikezelwe isenzakalo esithile. Izindleko kulokhu kuzohluka komunye kanye ruble ayizigidi isigamu ngalinye isivakashi.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi esitezi sokuqala yokudlela okwesikhathi umthamo idili izihlalo 62, futhi esitezi sesibili zizongena Abantu abangu-73. Ngakwelinye ihlangothi, yokwamukela kungenzeka kuphela esitezi sokuqala, futhi inombolo enkulu lezihlalo Kulokhu kuyoba ulingana 150.
izindleko elilinganiselwe etafuleni lezitsha endaweni enjalo, njengendawo yokudlela "imvubu" (Petersburg), lobuya izivakashi iphuzu esizoxoxa ngalo kamuva kulesi sihloko, ungabheka ne umlawuli. Nokho, intengo ubuncane kuyoba ulingana ruble 1000 ngomuntu ngamunye.
Yini okunye okufanele ukwazi ngalokhu yokudlela?
Kubalulekile ukuthi ngemva kwamahora angu-23, ungaqhubeka ekugubheni umcimbi, kodwa ukuletha utshwala akho "Hippo" ngeke isebenze, ngoba akuvunyelwe nakancane ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuqasha yokudlela iyonke.
Ngokwesibonelo, kuvalwe Karaoke ihholo on a zaphakathi nesonto kuyokulahlekisela ecishe ibe yizinkulungwane 500. Ruble, futhi leli nani niyozenezelelwa 10% service icala. Ngakwelinye ihlangothi, ngempelasonto ukuvala izikhungo Karaoke ziyatholakala ruble 1 million (isamba uyophinde ukungezwa isevisi 10%). Nokho kulokhu Ukuvala wonke kwebha zingenza, intengo uzodinga ihlolwe nesimiso sokuqondisa sikhungo.
By the way, kuyathakazelisa kakhulu ukuthi yokudlela "imvubu" Petersburg, kukhona uhlelo olukhethekile izaphulelo for isikhukhukazi. Kulokhu, uma ufuna ukumaka ekhumbulekayo bachelorette party, udinga ukuxhumana ekuphathweni lesikhungo kanye ukuxazulula zonke izinkinga nalo. Futhi njengesipho, uzothola amaphesenti amahlanu isaphulelo on zonke izitsha on the imenyu - kungcono kakhulu, akunjalo?
Kusukela appetizers abandayo kule ndawo ungakwazi umyalelo pate duck, okuyinto kungadla ruble 490 nje. Futhi iyatholakala oda tataki wewundlu (580 ruble). Inyama yenkomo tartar abemi lapha ruble 660, kanye carpaccio yenkomo kuyokulahlekisela ruble Russian 730 kuphela.
Ungase futhi ukhethe cassoulet imenyu (izindleko ruble 1590) noma ushizi assorted (intengo -. 1690 rbl). Yiqiniso, etholakalayo, kanye nezinye ukudla okulula, kodwa lezi, ngokuvumelana izikhungo ukukala, okungcono.
I batusa izivakashi ukuzama?
Ingxenye ethi "Kwenzeka Amasaladi" yokudlela amakhasimende Kunconywa ukuzama "OkaKhesari isaladi nge inkukhu" I-ruble 690., Isaladi Pan-Asia ne inyama yenkonyana ne-eggplant for ruble 780., A isaladi nge imbuzi ushizi ruble 620. futhi "OkaKhesari isaladi nge imfanzi" I-ruble 850.
Zogwadule nazo kakhulu kule yokudlela. Izivakashi belulekwa ukuba ukubhuka izitsha ezilandelayo: ushizi ikhekhe ingilazi nge Thyme okusajingijolo dessert "ubisi Lenyoni" ikhekhe black vanilla cream likhekhe "Napoleon", eclairs nge Ukhastadi. Izindleko yalezi kophudingi kuyahlukahluka ngaphakathi ruble 390-450.
Ngaphezu kwalokho, ungase futhi oda inyama eyosiwe. Ngokwesibonelo, inkukhu webele, kuphekwe ngale ndlela, ngeke ukhokhe ruble 650., Futhi yokubeka wewundlu izobiza ruble 1890. Ngakwelinye ihlangothi, ribeye, kuphekwe on the hlupha, imi ibha, "Hippo" ruble 2000 200.
amakhasimende amaningi kulesi sikhungo batusa kakhulu ke, ngoba ukukhonza okumnandi ngempela, futhi ezanele ukwakha izindleko eyamukelekayo. Oweta baqeqeshiwe, umsebenzi wabo ukwenza kanye nabanye abasebenzi zezikhungo, kubandakanya abapheki, abasebenzi ukuze sikwazi wena woza ujabulele ukunambitheka Amazing intandokazi yakho izitsha cuisine.
Futhi iyatholakala kukhona uhlu iwayini cocktail ikhadi, ngawo uzokwazi ukukhetha into. Oweta kukhona ukukusiza, futhi ngeke nanini enganeliseki njengokufa.
Kulaba minuses, ezinye amakhasimende ukusho kancane ukupheka izitsha, kodwa ngoba kukhona zokupheka eziyinkimbinkimbi ngempela ezidinga isikhathi. Ngokuvamile, yokudlela "imvubu" (Petersburg) - nendawo enkulu ukuchitha nesikhathi esijabulisayo unabangane!
Indawo yokudlela "Koreana", Petersburg ikheli, imenyu kanye nokubuyekeza
"Shaverma Petersburg" ku Ufa: amakheli, amamenyu, ukubuyekezwa
Uyini amandla Gibbs
Kwaselwandle amasaladi etafuleni iholide, zokupheka "okumnandi"
Isilinganiso Quick nezinye okungu zezimali.